Macallin Ronald Koeman oo doonaya inuu Barcelona keeno xiddig ka tirsan Kooxda Manchester United… (Waa kuma ciyaaryahankaas?) - Barwaaqo TV - Warbaahinta Bulshada Horumarkeeda
Macallin Ronald Koeman oo doonaya inuu Barcelona keeno xiddig ka tirsan Kooxda Manchester United… (Waa kuma ciyaaryahankaas?)
By admin October 9, 2021 41
(Barcelona) 09 Okt 2021. Tababaraha Kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa la soo warinayaa inuu Catalonia keeno ciyaaryahanka Manchester United ee Donny van de Beek.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa weli ku dhibtoonaya inuu si joogto ah ugu ciyaaro Manchester United, waxaana loo saadaalinayaa inuu soo afjaro waayihiisii ​​xumaa ee garoonka Old Trafford kaddib hal sano oo uu ku qaatay horyaalka Premier League.
Barcelona ayaa rajeynaysa inay ku xoojiso xulashooyinkeeda inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga jiilaalka, Koeman ayaana si fiican u garanaya Van de Beek waqtigoodii Netherlands.
Wargeyska Sport ee aadka ugu dhow Kooxda Barcelona ayaa warinaya in Koeman uu ka war qabo xaaladda Van de Beek ee Kooxda Manchester United, isla markaana uu diyaar u yahay inuu u soo bandhigo ciyaaryahankan inuu u soo dhaqaaqo Barca bisha Janaayo.
Si kastaba ha ahaatee, Ole Gunnar Solskjaer ayaa loo malaynayaa inuu diiday inuu Van de Beek ka tago bartamihii xilli ciyaareedkan, inkastoo xaqiiqdu ay tahay in 24-sano jirkaan uu ciyaaray kaliya lix daqiiqo oo horyaalka Premier League ah xilli ciyaareedkan.
Kooxda kubadda cagta Everton ayaa sidoo kale la warinayaa inay doonayso inay dib u soo ceshato xiisihii ay u qabtay Van de Beek, kaasoo qandaraaskiisa garoonka Old Trafford uusan dhammaanayn ilaa laga gaaro sanadka 2025-ka.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland oo la kulmay taliyaha howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya+Sawirro
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha West Brom iyo Man United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey